Kedu ihe eji eme nche ụzọ? - TSINFA
Iji nwee ikike mgbochi izu ohi, ọnụ ụzọ mgbochi na-ezu ohi ga-agabiga usoro nhazi siri ike ma sie ike.
2.Door efere embossing
3.Door etiti embossing
7. eldkwado obere akụkụ
11. Nyefee akwụkwọ
11 usoro nkenke achọrọ ：
1. cuttingchacha efere: usoro ịchacha bụ njikọ dị ezigbo mkpa na imepụta ọnụ ụzọ. Ọkpụkpụ ọnwụ na ogo na-emetụta mmepe mmepụta na ogo nke ụzọ nchekwa. Na mmepụta ahụ, ọ dị mkpa ịhọrọ igwe ịkwa akwa kwesịrị ekwesị dịka ọkpụrụkpụ nke efere ahụ, iji zere ịchacha oke. A na-edozi elu agụba nke igwe na-akpacha ajị na njide ihe eji arụ ọrụ, a na-ejikwa agụba ala arụ ọrụ na ebe a na-arụ ọrụ. Tupu ị banye igwe na-akpacha ajị anụ, ọ dị mkpa ka e mezie nkuku efere ahụ ma dozie ya site na ihe ndozi iji belata ntụgharị nke efere ahụ, iji nweta ihe eji arụ ọrụ dị elu.
2. Dozọ efere enbossing: dị ka e mere embossing ụkpụrụ, ndị na-anwụ anwụ na-mere, na nnukwu tonnage, obere table top na elu-nkenke atọ doo na asatọ kọlụmigwe akụrụngwa haịdrọlikeji ya mee ihe ngwa ngwa ichapu ihe eji eme ka igwe ma obu igwe. N'oge embossing, a na-eji mgbanaka ọnụ iji pịa mpụta nke efere ahụ, wee nweta ụkpụrụ a chọrọ site na ịpị isi elu na nke ala. Site na-agbanwe ebu ebu, a igwe nwere ike iji pịa a dịgasị iche iche nke ihe nakawa etu esi, na embossing mmetụta dị mma, ụkpụrụ bụ doro anya na-atọ akụkụ uche siri ike. Enwere ike idozi nrụgide ọrụ, ịpị ọsọ na strok nke okpukpu atọ kọlụm nke hydraulic pịa n'ime oke akara akọwapụtara dịka usoro chọrọ. Igwe ahụ nwere usoro ikike onwe ya na sistemụ eletrik, ma nakweere bọtịnụ nke etiti, nke nwere ike ịghọta usoro ọrụ atọ: akwụkwọ ntuziaka, ọkara akpaka na akpaka. Ọ nwere ike ịghọta ụdị ọnọdụ abụọ: nrụgide na-adịgide adịgide na ọkwa dịgasị iche. Ọrụ ahụ dị mfe ma dị mma, igwe ahụ dịkwa ike nchekwa ma rụọ ọrụ nke ọma.
3. Ọnụ ụzọ na-embossing: jiri ụdị ụdị gantry hydraulic pịa ya na etiti ọnụ ụzọ ịkpụzi iji nweta usoro achọrọ. Igwe ihe eji emeghe ọnụ ụzọ na-agbakwunye usoro mepere emepe, nke bụ akụ na ụba na nke bara uru. Njikwa haịdrọlik na-agbaso sistemu katrij jikọtara iji belata igirigi. Ọ nwere ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ogologo ndụ ndụ, ezigbo ike na nkwụsi ike, na ọdịdị mara mma.
4. Punching: ọkpọ ọkpọ na 25t, 35t ntụmadị pịa. Mgbe efere edozi na ọkpọ, usoro ọkpọ nke isi olulu, oghere ụzọ, oghere aka, oghere ọnụ ụzọ, oghere olulu na oghere anya pusi agwụla iji hụ na ọnọdụ ziri ezi na nha ziri ezi.
5. Slotting: dị ka imewe chọrọ nke dị iche iche mgbochi na-ezu ohi ụzọ ụzọ ngwaahịa, efere na-etinye na akpaka mgbochi na-ezu ohi ụzọ slotting igwe oghere oghere akara aka nke mgbabere uzo nke mgbochi-ezu ohi ụzọ.
6. endinggbanye: tinye ọnụ ụzọ na ọnụ ụzọ ụzọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ hydraulic, pịa ya na efere ịpị, họrọ akara ọhụụ, setịpụ ọrịa strok, ma mezue usoro ntụgharị nke ọnụ ụzọ na ọnụ ụzọ mgbe ọtụtụ ugboro ugboro ugboro. .
7. gbado ọkụ obere akụkụ: a na-eme usoro ịgbado ọkụ eletriki maka obere akụkụ na ọnụ ụzọ mgbochi na-egbochi izu ohi ka ọ dị mkpa ka a na-ebute ya na mmepụta nke mbido, gụnyere mgbatị edoziri edozi, efere mgbatị elu na ala, igbe mkpọchi isi na akụkụ ndị ọzọ.
8. Phosphating: ígwè efere na-etinye n'ime pickling na phosphating ngwọta. Mgbe degreasing, tetara, pickling, phosphating na ndị ọzọ Filiks, a oyi akwa nke phosphating nchedo ihe nkiri na-guzobere na elu nke mgbochi na-ezu ohi ụzọ, ka iji hụ na efere agaghị nchara tupu spraying, ka ikwado plastic spraying.
9. Gluing: jupụta ọdịiche dị n’etiti oghere ihu na azụ na mpempe mmanụ a honeyụ, akwa ọkụ na ihe ndị ọzọ na-ejuputa, ma jiri igwe na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ iji kpoo oghere ụzọ iji mee ka ọ dị.
10. Plastic spraying: iji elu voltaji nke static ọkụ eletrik, polyester, epoxy na ndị ọzọ polima coatings na-sprayed n'elu nke mgbochi na-ezu ohi ụzọ mgbe phosphating na-etolite a oyi akwa nke corrosion na-eguzogide oyi akwa.
11. Nyefee na-ebi akwụkwọ: ịgba pụrụ iche "nyefe ntụ ntụ" na elu nke nche ụzọ, mama na mado nyefe akwụkwọ. Mgbe minit 20 gachara na 165 ℃, a na-emepụta akwa mkpuchi siri ike, nke na-eguzogide ọgwụ, nke dị mgbagwoju anya ma mara mma.
12. Agba agba: kpọgidere mgbochi na-ezu ohi ụzọ na-ezite ya na oven na n'aka maka elu-okpomọkụ agba mmiri, ka idozi ịgba na nyefe mmetụta, na-amụba mgbochi fading ike nke mgbochi-ezu ohi ụzọ elu.
13. Nhicha: a ga-ekpocha ọnụ ụzọ mgbochi na-ezu ohi, ma wepụ ihe fọdụrụ nke usoro gara aga, wee kpojupụta ngwaahịa ahụ ma wepụta ya.
Ka ọ dị ugbu a, ahịa ọnụ ụzọ nchekwa dị na oge mgbanwe nke "site na nke ukwu na mma". Site na oke echiche, n'okpuru mkpalite nke nkwalite na mmepe obodo, atụmanya ahịa nke ọnụ ụzọ na-emegide ohi sara mbara. Site na obere echiche, site na mmụba na-aga n'ihu nke mmata nchekwa ndị mmadụ na nchekwa nchekwa, ngwaahịa na ụzọ mgbochi na-egbochi izu ohi ga-apụta ma weta nnukwu uru "ụlọ ọrụ mmepụta." Dika ntọala mmeputa, uzo ihe eji emeputa ihe nke oge a na ndi okacha amara nke onu ogugu ndi mmadu aghaghi ibu “ihe di nkpa” nke ulo oru mmeputa ndia.